ဇနျနဝါရီ 2020 – Healthy Life Journal
မိသားစုနှင့် ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါအကြောင်း (Family and Diabetes)
ပါမောက္ခဒေါ်သန်းသန်းအေး (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ကမ္ဘာပေါ်မှာ ၄၂၅ သန်းသောလူတို့ဟာ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါကို ခံစားနေကြရပါတယ်။ များသောအားဖြင့် သူတို့တွေဟာ အမျိုးအစား (၂) ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှိသူတွေဖြစ်ပြီး တကယ်တော့ ကျန်းမာအောင် နေထိုင်စားသောက်မယ်၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးနေထိုင်ကြမယ်ဆိုရင် ဒီရောဂါကို တော်တော်လေးထိရောက်အောင်...
ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့်အထွေထွေရောဂါ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း) Q. အာဟာရဓာတ်တွေအကြောင်း သိပါရစေ ဆရာ။ A. လူတွေအစာစားတဲ့အခါ ဆဲလ်တွေ ပုံမှန်အလုပ်လုပ်နိုင်အောင် လိုအပ်တဲ့စွမ်းအင်နဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေ ရရှိစေပါတယ်။ အာဟာရမှာ Macronutrients နဲ့ Micronutrients ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။...
ဒေါက်တာစိုးလွင် (သားဖွားမီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ဖြေကြားသည်။ ကျွန်တော်က ဆရာဝန်တွေထဲမှာ ကံအကောင်းဆုံး ဆရာဝန်လို့တောင် ပြောလို့ရမလားမသိဘူး။ အခုလို ဆရာဝန်ဘ၀ကို သိပ်ကိုပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဆရာဝန်တွေအများကြီးထဲမှာမှ ကျွန်တော်ရဲ့ ဆရာဝန်ဘ၀က သားသားမီးမီးလေးတွေ လောကကြီးထဲကို ကျန်းကျန်းမာမာ ချောချောမောမောနဲ့ ရောက်လာခွင့်ရအောင် ကူညီပေးခွင့်ရတဲ့...
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များအတွက် အရေးကြီးဆုံး ဖောလိတ်ဓာတ်
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေမှာ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ ဖောလိတ်ပါ။ စားတဲ့အစာတွေမှာ ဖောလိတ်ဓာတ်ပါဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အစားအစာဆိုရင်တော့ ဖောလိတ်ဓာတ်ပေါ့။ ဆေးအနေနဲ့ သောက်မယ်ဆိုရင်တော့ ဖောလစ်အက်စစ်ပါ။ ဖောလိတ်ဓာတ် ပြည့်ပြည့်၀၀ရရှိရင် ရရှိမည့်အကျိုးကျေးဇူးများ ဖောလိတ်ဆိုတာ့ ဗီတာမင်ဘီ အမျိုးအစားတစ်ခုပါပဲ။ ဖောလိတ်ဓာတ်...
စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အရေပြားက လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အကြီးဆုံးအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အရေပြားက လူ့ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန်ရဲ့ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါး ရှိပါတယ်။ အရေပြားက ကိုယ်အပူချိန်ကို ချိန်ညှိခြင်း၊ အပူအအေး ဆန်းစစ်ခြင်းနဲ့ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ပြင်ပကူးစက်ပိုးတွေနဲ့ ရောဂါတွေမကျရောက်အောင် ကာကွယ်ခြင်း စတဲ့နည်းတွေနဲ့...
ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အခက်အခဲတွေ၊ ဖိအားတွေ၊ အရှုံးတွေ ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူတွေက တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီလို ယုံကြည်မှုရှိတာက စိတ်ခွန်အားကြောင့်ဖြစ်တာကြောင့် စိတ်ခွန်အားရှိနေဖို့ ဘယ်လိုနေထိုင်သင့်သလဲဆိုတာ လေ့လာကြည့်ရအောင်။ မတ်မတ်ရပ်ပါ၊ မတ်မတ်ထိုင်ပါ ဦးနှောက်က သင်ဘယ်လို ခံစားနေရသလဲဆိုတာ သိစေဖို့...
၀က်ခြံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကောလာဟလက မှန်ရဲ့လား . . .
မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အရွယ်ရောက်ချိန်မှာ ပေါက်တဲ့ဝက်ခြံက တော်တော်နဲ့မပျောက်ဘူးဆိုတာမျိုး သင်ကြားဖူးမှာပါ။ ၀က်ခြံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဒီလိုအယူအဆတွေက အမှန်လား၊ ကောလာဟလ သက်သက်ပဲလားဆိုတာ သိစေဖို့ အရေပြားအထူးကု ဆရာဝန်တွေရဲ့ အကြံပြုပြောဆိုချက်တွေကို ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။ အယူအဆ (၁) အရွယ်ရောက်ချိန် ပေါက်တဲ့ဝက်ခြံက ဆယ်ကျော်သက်ဝက်ခြံနဲ့ ကုသနည်း...
ဆောင်းတွင်း ဓာတ်မတည့်မှုပြဿနာ ကင်းဝေးချင်တယ်ဆိုရင်
ငွေကြယ်စင်ယံ ဆောင်းရာသီမှာ နှာစေးတာ၊ အဖုအပိမ့်ပေါက်တာ၊ အင်ပျဉ်ထတာ အစရှိတဲ့ ဓာတ်မတည့်တဲ့ ဝေဒနာတွေ အဖြစ်များတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဓာတ်မတည့်မှု ကင်းဝေးစေဖို့ အောက်ပါနည်းလမ်းတွေကို လိုက်နာသင့်ပါတယ်။ တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းရေး ဆောင်းတွင်းမှာ တစ်ကြိမ်ဝတ်ပြီးသား အ၀တ်အစားတွေကို မလျှော်ဘဲ၊ မီးပူမတိုက်ဘဲ ပြန်မ၀တ်သင့်ပါဘူး။...
ဇနျနဝါရီ လ၊ 2020 ခုနှဈ